I-Asean Road Transport-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>EzokuThutha Emgwaqweni Wezizwe>Ukuhamba ngomgwaqo wase-Asean
Izindlela ezinkulu zokuhamba ngomgwaqo zinjengokulandelayo:
1. IPingxiang eGuangxi - eVietnam
2. IPingxiang eGuangxi - eVietnam - eCambodia / eThailand / eLaos
3. UHekou eYunnan- - lao Cai (Vietnam) - Vietnam
4. URuili eYunnan - eMyanmar
5. Ibhotela eYunan-Laos
Hlobo luni lwezimpahla olufanele ukuthuthwa komgwaqo okuya e-ASEAN?
Izimpahla zesiteshi se-Hydropower, imishini yobunjiniyela, imishini yezimoto, i-forklift, izinto zokwakha, ukudla, ubuciko kanye nezobuciko, ukuhlinzekwa kwansuku zonke kufanelekile ukuthutha umgwaqo kwamazwe jikelele ukuya e-ASEAN.
Ungasenza kanjani isimemezelo senkambiso, ukuhambisa inkambiso nokuvunyelwa kwamasiko okuthuthwa komgwaqo okuya e-ASEAN?
A. Ukuthuthwa komgwaqo oya e-ASEAN kuzokwenza isimemezelo sokuthumela ngaphandle ngokuya ngemininingwane efanele yezithuthi zezangaphandle kanye namasiko endawo ngemuva kokulayisha ezimotweni zakwamanye amazwe eSupervised Warehouse.
Ukuhamba ngomgwaqo okuya e-ASEAN kungamenyezelwa ethekwini elingumngcele ukuze kutholakale amasiko noma endaweni yephrojekthi.
Yimuphi umshini osetshenziselwa ukuthutha umgwaqo omkhulu oya e-ASEAN?
Kuthiwani ngomthethosivivinywa wokulayishwa kwezokuthuthwa komgwaqo emazweni e-ASEAN?